आकाश को खेती को बारेमा खासै भन्नुछैन, हेर्नुपर्ने ले आँखा चिम्लिएकाछन् !
दशैँ को शुभकामना !
शुभ विजया दशमी , तर यि अाकासे फल हरू कसरी टिप्नु ?
नयाँ विषयको उठान गर्नुभयो । सुरुमा पोस्टको शीर्षक झुलुक्क हेर्दा त दसैंको मुखमा भएको वर्षा र आकाशे पानी संकलनको कुरा गर्नुभएछ कि जस्तो लागेको थियो । देखिराखेको तर उति हेक्का नराखेको कुरा परेछ । तस्विरहरू ताजा छन् ।
अन्त्यमा, सपरिवारमा बडादसैंको शुभकामना भाउजू !
लक्ष्मण गुरुङ said...
साधरण सधै देखीरहेको विषय बस्तुलाइ सारै मिठो गरेर पस्कनु भो धन्यवाद! बडा दशैंको धेरै धेरै शुभकामना तपाइ लाइ।
herda pheri ta Tare kheti jasto xa ni
यो शहरी "भेजिटेबल नेटवर्क" लाई सुन्दर फोटोहरु सहित प्रस्तुत गर्नु भएको राम्रो लाग्यो! खतरनाक यो आकाशे खेती गर्नेहरुलाई बेलैमा चेत खुले हुन्थ्यो।
आकाश खेतीले बित्याँस नपारोस !
krishnanewsअनलाईन खबर said...
sho nice pice i like this
तपाईको यो ब्लगले मेरो मन सारै नै छोयो । तपाईको यो कार्य तथा नविन जिवनको लागी आगामी दिनमा सफलताको पाईलाहरुले छुदै जाहोस भनी सुभकामना छ । krishnanews1@gmail.com
भुईँ तिर पानि पाईन्न क्यारे, उतै आकाश तिरै झ्याप हान्न सकिन्छकि भनेर हो ला है सुजन जी यो आकाश तिरै बढेको।
मलाई याद छ, थुप्रै घिरौला र लौका आकाश तिर फलेको।। ठिलै भए पनि शुभकामना है हजुरहरुलाई
Kedar Nath Nyaupane said...
Very good article pointing possible accident also. I could not find the contact link so I am writing some thing not related to the above article - Sorry for this. I would like to thank you very much for putting the link to तिथी सहितको नेपाली क्यालेण्डर. I have changed layout of the site so I kindly request you to link to http://www.rishiram.org/nepali-calendar.html - Kedar Nath Nyaupane
म त हजुर हराउनु भो कि भनेर खोज्दै आईपुगेको। हेहे